१४ महिना तलब नपाउँदा पनि वैदेशिक रोजगारका कर्मचारी उत्साही « प्रशासन
काठमाडौं । तलब नपाएको १४ महिना भयो । तैपनि उत्साहसाथ कार्यालयमा काम गरिरहेका छन् । नियमित तलब पाइने ठाउँमा सरुवाको अवसर मिल्दा पनि जाँदैनन् । यति कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी कहाँका होलान् ?
सरकारसँग तलब माग
सामान्यको सरुवा मान्दैनन्
के भन्छन् तलब नपाउने कर्मचारी ?
१४ महिनादेखि तलब नबुझी काम गरिरहेका कर्मचारी सरसापटी र ऋणमा जीवन चलाएर भए पनि काम गरिरहेको बताउँछन् । सरकारले कुनै दिन तलब दिने निश्चित भएकाले धेरै चिन्ता नलिएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ । ‘सरकारी कर्मचारीले तलब नपाउने भन्ने हुँदैन । त्यही भएर पनि काम गरिरहेका छौँ,’ कम्प्युटर अधिकृत भवानी थपलियाले भनिन् ।
तलब नपाए पनि कर्मचारीले काम गरिरहेको समाचार भने नलेखिदिन आग्रह गर्दै उनले थपिन्, ‘समाचार लेख्नुभयो भने त हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ । अहिलेको मन्त्रीज्यू हामीबारे सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’ अर्का नायब सुब्बा मधुकर डाँगीले पनि सरुवा भएर आएदेखि तलब नपाएको बताए । ‘डोल्पाबाट सरुवा भएर आएको, तलब खुवाउनेबारे लेखाले चासो नै दिँदैन,’ उनले भने ।
विभागका निर्देशक मोहन अधिकारीले मन्त्री, सचिव र सहसचिवको दबाबमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी खटाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘विभागमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन्,’ उनले भने, ‘ती कार्यालयमा भने दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भएको सत्य हो ।
१४ महिनादेखि तलब नपाउँदा पनि काम गर्ने कर्मचारी
वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा गैरकानुनी आर्थिक स्रोत गतिलो हुने भएकाले कर्मचारी अन्यत्र जान मान्दैनन् । राजनीतिक दबाबका कारण त्यहाँ बढी भएका कर्मचारीलाई अन्यन्त्र खटाउन नसकिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘आकर्षक कार्यालयमा यस्तो धेरै समस्या छ, थोरै चलाउन थाल्यो भने पहुँचवालाको फोन बजिहाल्छ,’ स्रोतले भन्यो । वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलका निमित्त प्रमुख प्रेमबहादुर देसारले भने कर्मचारीलाई काम गर्न सहज भएकाले अन्यत्र जान नचाहेको बताए । ‘यहाँ काम गर्न पनि सहज छ, त्यही भएर होला,’ उनले हाँस्दै भने । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।